Fitakian’ny depiote teny amin’ ny HCC : Tsy nahomby indray ny tetika -
AccueilRaharaham-pirenenaFitakian’ny depiote teny amin’ ny HCC : Tsy nahomby indray ny tetika
26/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitady anarana hetsika entina hikitihana ny vahoaka hanakorontana hatrany ireo solombavambahoaka, ka any andrasan’ izy ireo dia ny ho sakanan’ny mpitandro ny filaminana sy hisian’ ny korontana ary fandrobana ny fananan’ny Malagasy izay mba mitady. Nalalaka tokoa ny hetsika izay notanterahin’ ireo solombavambahoaka omaly, izay nitondrana sy nitaritan’izy ireo ny mpanara-dia teny an-dalambe. Tsy nisy ny mpitandro filaminana nanakana, ary malalaka ihany koa ny fidirana tetsy amin’ ny HCC Ambohidahy, izy ireo indray aza no toa sahirana tamin’ ny fifamoivozana sy izay ho diavin’ ny tongotra satria notangoronan’ ny olona nanaraka azy. Manginy fotsiny ihany koa ny tahotra amin’ izay mety hihoa-pefy sy izay tsy ilaozan’izay mety iray amin’ ireo mety hanao ratsy. Rehefa tsy nisy moa ny fanakanana sy ny korontana izay notadiavina teny an-dalana dia nitodi-doha niverina tetsy amin’ ny lapan’ ny tanàna avokoa ireto mpanao fihetsiketsehana ireto, izay tazana ihany tamin’ ny alalan’ ny endrik’izy ireo fa sorena noho ny tsy fahatomombanan’ ny paika.
Mikasika io resaka fitakiana ny fialan’ny filoham-pirenena izay hoe napetraka teny amin’ ny HCC, noho ny tsy fanatanterahana ny fananganana ny HCJ sy ny tokony hisian’ny fifanarahana teo amin’ ny filoha sy ny solombavambahoaka. Mahagaga ihany satria raha mikasika io fifanarahana io dia tsy ny filoha irery no voalaza fa hifanaraka, fa teo ihany koa ireo solombavambahoaka. Izany hoe maninona izany no tsy nitory ny tenany ireo solombavambahoaka ireo fa nitory olona iray, nefa dia samy tompon’andraikitra ny roa tonta. Midika aloha ity antony nankanesana tetsy amin’ ny HCC ity fa fitadiavana hirika hisian’ny korontana fotsiny ihany, fa kosa tsy fitiavan-tanindrazana velively. Raha toa samy milaza fa tia tanindrazana ireto solombavambahoaka ireto dia miandry ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana izay efa am-bolana sisa fa tsy an-taonany akory. Satria tokony ho tsapan’ izy ireo fa raha toa misy ny korontana, dia ireo mpivarotra madinika ireo fianakaviana sahirana, ireo mpiasa tena no tena ho voa mafy amin’ izany. Ireo voalaza rehetra ireo anefa dia anisan’ny maro an’isa eto an-drenivohitra .